के हो नात्तो ? यो खाँदा हुने फाइदाहरु के के छन् ? | Nepali In Japan
के हो नात्तो ? यो खाँदा हुने फाइदाहरु के के छन् ?
October 2, 2019 March 17, 2021
नात्तो जापानी मौलिक खाना हो । कयौं शताब्दीदेखि अहिलेसमम पनि जापानी परिकारको हिस्सा बन्दै आएको । तर यसको लोकप्रियता अहिले सीमापार पनि फैलिएको छ । नात्तो यति धेरै लोकप्रिय हुनुको एउटा कारण हो यसको सेवनका असंख्य लाभ छन् । हाम्रो मुटु, छाला र हाडको लागि यो निकै लाभदायक छ । भटमासलाई फर्मेन्ट गरेर नात्तो बनाइन्छ । यस प्रक्रियामा भटमासहरु बसिलस सब्टिलिससँग फर्मेन्ट हुन्छ । फर्मेन्टेशन प्रक्रियाका कारण भटमास खान र पचाउन सजिलो भएको हुन्छ । एक स्रहशताब्दीभन्दा लामो समययता जापानीहरुले नात्तोलाई सुपर फूड मान्दै आएका छन् । यसको स्वाद कडा र तिखो हुन्छ अनि यसको टेक्चर पनि अनौठो छ । त्यसैले गर्दा नात्तो खान विदेशीहरुलाई गाह्रो हुन सक्छ ।
वास्तवमा कयौं जापानीहरुले पनि यसलाई मन पराउँदैन । यद्यपि यसको स्वाद उपार्जित हो अनि यसले स्वास्थ्यमा पार्ने सकारात्म्क प्रभावलाई दृष्टिगत गर्ने हो भने तपाईले पक्कै पनि यो खानेबारे सोच्नु पर्छ । यो मानिसको भित्री र बाहिरी दुबै स्वास्थ्यको लागि राम्रो छ । जापानमा मानिसहरु बिहानको खाजाको रुपमा नात्तो खान्छन् । यसको फ्लेभरलाई रुचिकर बनाउन तपाईले यसलाई सुसीसँग मिसाएर पनि खान सक्नु हुन्छ ।
त्यसो भए नात्तो सेवनले मानव शरीरमा हुने फाइदाहरु के के हुन ? यहाँ यसका प्रमुख १० लाभहरुबारे बताइएको छः
१. उच्च मात्रामा भिटामिन के
भिटामिन के१ र के २ दुबै पाइने खानेकुरा एकदम थोरै छन् । नात्तो यही विशेष क्लबमा पर्छ । तपाईले ब्याक्टेरियाबाट के२ पाउनु हुन्छ अनि पात जस्तै हरियो भागबाट के१ पाउनु हुन्छ । यो खानेकुरामा भिटामिन के भरपुर पाइन्छ । एक सर्भ (निश्चित परिणाममा एक पटक पस्किने खानेकुरालाई नै सर्भ भनिन्छ ।) नात्तोले तपाईले दैनिक रुपमा सेवन गर्नु पर्ने भिटामिन के को करीब ३० प्रतिशत पूर्ति गर्दछ । भिटामिन केले रगत जम्ने जोखिम कम गर्छ । यसले हाड खिइने दिँदैन अनि आर्टरी पनि सफा गर्छ । भिटामिन केको अभाव भयो भने अस्टियोपोरोसिस र रक्तश्रावको जोखिम उच्च हुन्छ अनि घाउ चोट निको हुन पनि निकै समय लाग्छ ।
२. प्रोबायोटिक्सको ठूलो स्रोत
पहिलो कुरा त तपाईले फर्मेन्ट नगरिएको भटमास खानै हुँदैन । तपाईले खानु भइहाल्यो भने पनि तपाई हर्मोन डिस्फङसनबाट पीडित बन्न सक्नु हुन्छ । तपाईको थाईरोइडको स्वास्थ्यमा पनि यसले प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्छ । तर फर्मेन्टेशनले यी सबै समस्याहरु भगाउँछ । नात्तो भटमास फर्मेन्ट गरेर बनाइने भएकोले तपाईले यसको सेवनले ठूला परिमाणमा स्वस्थकर ब्याक्टेरिया पाउनु हुनेछ । यो पाचनको लागि निकै फलदायी हुन सक्छ । कब्जियतको उपचार गर्न पनि नात्तो खान सकिन्छ ।
३. प्रचुर मात्रामा भिटामिन सी
एक सर्भ नात्तोबाट मात्रै १३ एमजी भिटामिन सी पाइन्छ । यसको अर्थ हो कि तपाईले दैनिक रुपमा खानु पर्ने भिटामिन सीको २० प्रतिशत त एक सर्भ नात्तोबाटै पाइन्छ । भिटानिमसले फ्रि र्याडिकलकम गर्न मद्दत गर्छ । यस्ता फ्रि र्याडिकलहरु निकै घातक हुन्छन् अनि यसका कारण क्यान्सर लगायतका घातक रोग लाग्न सक्छ । भिटामिन सीले शरीरको प्रतिरक्षा शक्ति पनि बढाउँछ ।
४. तौल घटाउन मद्दत मिल्छ
पोषक तत्वहरु भरपूर भएपनि नात्तोमा क्यालोरी कम हुन्छ । १ सय ग्राम नात्तोमा २ सय ग्राम मात्रै क्यालोरी सहित ५ ग्राम डाइटरी फाइबर हुन्छ । डाइटरी फाइबरले तपाईको पेट टन्न भएको महसुस गराउँछ । तपाई तौल घटाउन चाहनेहरु मध्ये एक हुनु हुन्छ भने तपाईले आफ्नो बिहानको नास्तामा नात्तो समावेश गर्नु वेश हुन्छ । यसको अर्को लाभ भनेको १ सय ग्राम नात्तोमा ११ ग्राम स्याचुरेटेड फयाट हुन्छ । यसले तपाईको उर्जा स्तर बढाउँछ ।
५. प्रोटिन र आइरन सेवन बढाउँछ
नात्तो लोकप्रिय हुनेका अर्को कारण हो शाकाहरीले यसको सेवन गर्नु पनि हो । नात्तोमा विभिन्न मासुमा पाइने प्रोटिन र आइरन जस्ता तत्वहरु पनि पाइन्छ । एक पटक पस्किने नात्तोबाट तपाईले दैनिक रुपमा खानु पर्ने कुल प्रोटिन र आइरनको ३५ प्रतिशत र ५० प्रतिशत पाउनु हुनेछ । हाम्रो शरीरमा अक्सिजन प्रवाह सहज बनाउन अनि सबै हिस्सामा पुगेको सुनिश्चि गर्न आइरन चाहिन्छ । मांशपेशी र कोषहरु मजबुत बनाउन प्रोटिन आवश्यक हुन्छ ।
६. हाड र दाँतको स्वास्थ्यको लागि
नात्तोमा क्याल्सियम र म्याग्नेसियम धेरै पाइन्छ । तपाईले दिनभरमा सेवन गर्नु पर्ने क्यालिसयम र म्याग्नेशिय नात्तोबाट मात्रै क्रमशः २० प्रतिशत र ३० प्रतिशत पूर्ति हुन्छ । दाँत अनि हाडको लागि क्याल्सियम चाहिन्छ । अनि म्याग्नेसियमले क्यालिसयमको मात्रा पूरा गर्न मद्दत गर्छ अनि शरीरलाइ पोषक तत्व सोस्न मद्दत गर्न पनि तपाईले आफ्नो दैनिक आहारमा नात्तोलाई समावेश गर्नु भयो भने हाडसँग सम्बन्धी रोगहरु लाग्ने जोखिम कम हुन्छ ।
७. रगत शुद्ध पार्छ
नात्तोमा शरीरको रगत शुद्ध बनाउन मद्दत गर्ने फाइबर, लेसिथिन र लेनोलिक लगायत विभिन्न पोषक तत्वहरु पनि हुन्छ । यी तत्वहरुले रगतलाई शुद्ध बनाउँछन् अनि शरीरको हरेक हिस्सा अक्सिजन, रगत र पोषक तत्वको प्रवाह सुधार्छ ।
८. छालालाई सुन्दर बनाउँछ
नात्तोमा पीक्यूक्यू नामक भिटामिन पनि पाइन्छ । यो भिटामिनको नाम तपाईले कहिल्यै सुन्नु भएको छ ? धेरैले यसको नाम सुनेकै हुँदैनन् । यो भिटामिन आहारको माध्यमबाट लिनु पर्छ । त्यसैले यसका लागि आफनो आहारमा नात्तो समावेश गर्नु उपर्यक्त हुन्छ । भिटामिन पीक्यूक्यूले तपाईको सुन्दरता कायम गर्न मद्दत गर्छ, छालालाई स्वस्थ बनाउँछ अनि तपाईलाई जवान देखिन पनि मद्दत गर्छ । उमेर नपुग्दै बुढ्यौलीको संकेतहरु रोक्न पनि यसले मद्दत गर्दछ ।
९. थप भिटामिन बी पूर्ति
तपाईले जति धेरै नात्तो खानु हुन्छ तपाईको भिटामिन बी सेवन पनि त्यति नै बढ्छ । यसमा बी१२ र बी६, रिबोफ्लभिन, थाइयामिन र फेलेट लगायत विभिन्न भिटामिनहरु पाइन्छ । तपाईलाई थाहै होला कि भिटामिन बी६ र बी१२ ले तपाईको कोषको मेटाबोलिजम बढाउँछ । यसमा ओमेगा फ्याटी एसिड, पोटासियम र जिङ्क देखि कपर, फोस्फोरस र म्याङगनिज सम्मका विभिन्न खनिजहरु पाइन्छ । फयाटी एसिडले दिमागको कार्य सुर्धान निकै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।
१०. मधुमेह भएकालाई उपयुक्त
नात्तोको ग्लाइसेमिक स्कोर ५ हो । यो भनेको निकै कम हो । दिनमा एक पटक मात्रै यो खाँदा यसले तपाईको रगतमा भएको चिनीको मात्रामा खासै प्रभाव पार्दैन । यसमा भएको पोषक तत्वहरुले मधुमेहका रोगीहरु पनि लाभान्वित हुन सक्छ । त्यसैले यो उनीहरु पनि खानु हुन्छ ।
नात्तोको स्वाद उपार्जित हो । त्यसैले तपाई पनि यसको स्वाद र वनावटमा अभ्यस्त हुन केही समय लाग्छ । तर यसले हाम्रो स्वास्थ्यमा पार्ने प्रभावबारे विचार गर्ने हो भने यो खानै पर्ने खानेकुरा मध्ये एकमा पर्दछ ।
Prevजापानमा विद्यार्थीले नेन्किन तिर्नु पर्छ कि पर्दैन ?
Nextजापानमा रहँदा विपत्तिको समयमा प्रयोग गर्नैपर्ने मोवाइल एपहरु